MM Daily Life - Page 146 of 147 - News and Media
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်… လူတစ်ယောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ သင်တွေးမိနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို မျက်လုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ သတိမထားမိလို့သာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာပါ …။ အပြုအမူ၊ အမူရာတွေအကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ သြစတေးလျ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Pease က လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို သူ့ရဲ့အမူရာတွေကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ၁. မျက်လုံးမှိတ်ထားရင် လူတစ်ယောက်က မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စကားပြောနေမယ်ဆိုရင် သူက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်လို့ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ သင့်ကိုကြောက်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သင့်ကို အနားမှမရှိစေချင်တာပါ။ သင့်အနားမှာရှိနေရင် သင့်အတွက်စိတ်ပင်ပန်း စေတယ်။ သူ့မျက်လုံးကို မှိတ်ထားတဲ့အခါ သင့်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးလေ …။ ၂. ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကွယ်ထားရင် ကလေးဘဝတည်းက အတန်တန်သတိပေးခံခဲ့ရတဲ့ အပြုအမူပါ။ … Read more